Juan Mata oo fursad u haysta inuu dib ugu laabto dalkiisa hooyo ee Spain, isagoo ku biiraya kooxda… – Gool FM
Juan Mata oo fursad u haysta inuu dib ugu laabto dalkiisa hooyo ee Spain, isagoo ku biiraya kooxda…
(Barcelona) 01 May 2019. Laacibka khadka dhexe ee kooxda Manchester United, Juan Mata ayaa fursad u haysta inuu dib ugu laabo dalkiisa hooyo ee Spain, isagoo ku biiri doona naadiga Barcelona.
Barcelona ayaa si weyn u xiiseynaysa Juan Mata, laakiin laacibka khadka dhexe ee Manchester United waa inuu dhimaa mushaarkiisa si uu u rumeeyo riyadiisa ah inuu ku dhaqaaqo Spain.
Mata heshiiskiisa garoonka Old Trafford waxa uu ku eg yahay bisha soo socota, waxaana la filayaa inuu ka dhaqaaqi doono Manchester kaddib heshiis shan sanadood iyo bar ah oo uu ku qaatay.
Juventus ayaa la warinayaa inay ugu cadcadahay saxiixa Mata, halka sidoo kale kooxaha Atletico Madrid iyo Arsenal ay sidoo kale xiiseynayaan xiddigan.
Wargeyska The Sun ayaa warinaysa in Mata uu si layaab leh bartilmaameed ugu noqday naadiga Barcelona, kaasoo doonaya fursadda uu dib ugu laabanayo dalkiisa hooyo, laakiin waa haddii uu ogolaado inuu dhimo mushaarka uu haatan qaato todobaadkii oo dhan 170 kulan oo gini.
Xiddigan xulka qaranka Spain u saftay 41 kulan ayaa dib ugu soo laabtay safka hore ee kooxda Man United kulankii ay ka horjeedeen Chelsea, waxaana uu gool ugu shubay kooxdiisii hore ee Blues kulankii dhacay Axaddii, taasoo ka dhigan inuu shan gool dhaliyey 30 kulan oo uu laacibkan khadka dhexe ciyaaray xilli ciyaareedkan.
Shaxda rasmiga ah kulanka Champions League caawa ee kooxaha Barcelona iyo Liverpool